Nei Uchishandisa Zvakakosha Zvidimbu Zvekufambisa
Kufamba kunogara kuchida kuronga zvishoma. Iwe unofanirwa kuve wakarongeka uye kuronga pamberi penguva kuti uve nechokwadi chekuti iwe unowana iyo yekufamba nzira ine zvishoma kumbomira, pamwe nezvimwe zvinobatsira sekusarudza zvigaro zvakanakisa nemakamuri ehotera.
Zvese izvi kuronga kunoshanda kune vanhu vakajairwa asi kana iwe uine chaicho chakakosha, kunyangwe kuronga kuri kudikanwa kuti uve nechokwadi nerunyararo rwendo.
Vanhu vane kufamba matambudziko haawanzo kunzwa ane chivimbo kana zvasvika pakufamba, asi kuva nemidziyo yakakodzera kunogona kuvabatsira kuwanazve chivimbo uye kunzwa kwekudzora. Midziyo iyi inogona kusanganisira scooter emagetsi, kufamba anobatsira, okisijeni michina, mavhiripu, mibhedha, machira evacheche nezvimwewo zvakanaka kune avo vanoda kufambidzana kufamba.
hwiricheya Kuwanika kwave Kwakashanduka
Yakanga isiri iyo nguva refu yapfuura iyo yekufamba ne kuremara ingadai yakave yakaoma kwazvo, asi nhasi michina yezvinodiwa zviripo panenge pese pese pakufamba kukuru pasi rese.
Kana iwe uri kufamba negungwa kana nendege, kufamba aides anogona kuita kuti rwendo ruve nyore kwazvo kune iyo remara munhu. Vagadziri ve kufamba zvishandiso zvinowanzove nezvitoro nezviteshi panhandare dzendege, main cruise lines, mahotera nemabhichi. Ivo vanopa kurendesa emagetsi scooter kana imwe michina kubatsira avo vane zvakakosha zvido.
Kunyangwe kufamba kungave kunonakidza uye kunonakidza, kunogona zvakare kunetesa iye munhu ane mashoma kufamba uye kufamba midziyo ichavabatsira kuti vanzwe kuzvimirira uye kuvimba.
Kana munhu ane mashoma kufamba anofara, munhu wese anogona kuzorora zvakanyanya uye nekunakidzwa zvizere nezororo rake uye oenda nezvekuvaka ndangariro kuti agare kweupenyu hwese.
Matipi Ekuti Uwane Sei Yekuvimbika Inodiwa Nezvinodiwa Midziyo?
Paunenge wanyatso kuita chirongwa chekuronga rwendo rwako, zvinokurudzirwa kuti utaure ne kufambidzana mumiriri wekufamba uyo anogona kukugadzirirai mhando yemidziyo yakakodzera iwe.
Patsamba imwe chete, zvakakosha kuti ujekese zvaunoda uye zvaunoda kujekesa mumiriri kuitira kuti agone kuita gadziriro dzakakodzera iwe dzerwendo rwako.
Iwe unogona zvakare kutsvagisa online kana akasiyana makambani ayo anopa akakosha michina. Tsvaga kambani inokodzera zvaunoda uye inogona kukupa iwe unhu zvishandiso pamazuva ako aunofarira.
Iwe unogona zvakare kupinda mukutaurirana neako healthcare centre kune rumwe rubatsiro. Makiriniki ezvehutano nezvipatara zvinowanzo kuve zvichisangana nemakambani akadai sezvo vachida midziyo yenzvimbo yacho nguva dzose.
Kanganwa zvekugara mumba; shandisa yakakosha zvinodikanwa zvekushandisa kuti uwedzere ruzivo rwako rwekufamba, kukupa iwe kuvimba uye kukugonesa kufamba nyika usingatyi.